Efa navoaka ny GCC 12.1 ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 07/05/2022 17:41 | fampiharana
Taorian'ny fampandrosoana iray taona Navoaka ny fonosana fananganana GCC 12.1, ny famoahana manan-danja voalohany amin'ny sampana GCC 12.x vaovao.
Eo ambanin'ny drafi-panondroana dikan-teny vaovao, ny dikan-teny 12.0 dia nampiasaina nandritra ny fampandrosoana, ary fotoana fohy talohan'ny famoahana ny GCC 12.1, dia efa nisaraka ny sampana GCC 13.0, izay hiforonan'ny dikan-teny lehibe manaraka an'ny GCC 13.1.
GCC 12.1 Endri-javatra vaovao lehibe
Amin'ity dikan-teny vaovao atolotra ity dia asongadina fa se nanampy fanohanana ny CTF debugging endrika, izay manome fitehirizana vaovao momba ny karazana C, ny fifandraisana misy eo amin'ny fiasa, ary ny marika debug. Rehefa tafiditra ao anatin'ny zavatra ELF, ny endrika dia mamela ny fampiasana ny tabilao marika EFL mba hisorohana ny dika mitovy.
Ankoatra izay dia marihina fa mitohy manitatra ny fanohanana ny fenitra C2X sy C++23 ho avy ho an'ny C sy C++ ny asa ary izany koa ny mifanentana amin'ny ny fizarana andrana amin'ny fenitra C++20 sy C++23 dia nohatsaraina ao amin'ny C++ Standard Library.
Ho an'ny maritrano x86, nanampy fiarovana fanampiny amin'ny vulnerability processeur nateraky ny famonoana tombantombana ny toromarika aorian'ny asa mitsambikina tsy misy fepetra. Ny olana dia avy amin'ny fanodinana mialoha ny toromarika manaraka avy hatrany ny torolàlana hitsambikina ao amin'ny fitadidiana (SLS, Straight Line Speculation). Ny safidy "-mharden-sls" dia soso-kevitra mba ahafahana miaro.
Nasongadina ihany koa izany nanampy famaritana ho an'ny fampiasana ny fari-pahalalana uninitialized mankany amin'ny analyser static andrana. Nampiana fanohanana voalohany ho an'ny famafazana kaody fivoriambe amin'ny fampidirana an-tsipika. Fanaraha-maso fahatsiarovana nohatsaraina. Kaody naverina nosoratana mba hifehezana ny fitenenana fanovana.
Niampy Antso vaovao 30 ho an'ny libgccjit, tranomboky ifampizarana mba hampidirana mpamorona kaody amin'ny dingana hafa ary hampiasa azy io ho an'ny JIT bytecode amin'ny fanangonana kaody teratany.
Etsy andaniny, asongadina fa ny fanohanana ny mekanika CO-RE (Compile indray mandeha - Run Everywhere) mankany amin'ny backend mba hamoronana BPF bytecode, izay mamela ny fanangonana ny kaody amin'ny programa eBPF ho an'ny kernel Linux indray mandeha ary mampiasa loader manerantany manokana izay mampifanaraka ny programa voapetraka amin'ny karazana kernel sy BTF ankehitriny (endrika karazana BPF). Ny CO-RE dia mamaha ny olana amin'ny fampitana ny programa eBPF natambatra izay tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny dikan-kernel izay nanorenana azy ireo teo aloha, satria miovaova ny toeran'ny singa ao amin'ny rafitra data.
efa nampiana ny Fanohanana backend RISC-V ho an'ny fanitarana maritrano vaovao an'ny set instruction zba, zbb, zbc, ary zbs, ary koa ny fanitarana ISA ho an'ny hetsika kriptografika vector sy scalar. Fanohanana ny fanondroana RISC-V ISA 20191213 dia omena amin'ny alàlan'ny default. Nampiana -mtune=thead-c906 saina mba ahafahana manatsara ny kernel T-HEAD c906.
nanampy fanohanana ny karazana __int128_t/integer(karazana=16) mankany amin'ny backend famoronana code ho an'ny AMD GPUs mifototra amin'ny microarchitecture GCN. Azo atao ny mampiasa vondrona miasa hatramin'ny 40 isaky ny vondrona kajy (CU) ary hatramin'ny 16 eo anoloana fampianarana (wavefront, andian-tady atao mifanitsy amin'ny SIMD Engine) isaky ny vondrona. Teo aloha, iray ihany ny sisiny fampianarana isaky ny CU navela.
Ny famantarana "-march", "-mptx" ary "-march-map" dia nampiana tao amin'ny backend NVPTX, natao ho an'ny famoronana kaody amin'ny alàlan'ny NVIDIA PTX (Parallel Thread Execution). Fanohanana ny PTX ISA sm_53, sm_70, sm_75 ary sm_80. Ny maritrano default dia sm_30.
Ankoatra izay dia misongadina amin’izany namaha olana iray izay hanaovan'ny mpanangona fikarohana tsy mendrika amin'ny fitenenana mpandraharaha miankina amin'ny fotoana famaritana môdely fa tsy amin'ny fotoana fanombohana. Ity vahaolana ity dia mifanandrify amin'ny fihetsika efa misy ho an'ny fanehoana fiantsoana miankina.
Marihina fa ny 23 mey no hankalazana ny faha-35 taona nijoroan’ny GCC voalohany ny tetikasa. Farany raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Efa nivoaka ny GCC 12.1 ary ireto ny vaovao